Portfolio ime imewe ụlọ nke oge a - Ime ụlọ imewe kpochapụwo Villas Bucharest - Nobili Interior Design, studio, architect, designer, ụlọ ọrụ, imewe, ahịa
Ọrụ imepụta ụlọ anyị na-eme maka ụlọ, ụlọ ahịa na ụlọ dị iche iche na-egosipụta oge niile, ụdị mmasị na mkpa nke ezinụlọ ọ bụla. Nhazi na njikarịcha nke oghere dị ndụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ọrụ imepụta ime. Anyị na-enye 3 D ngwọta na atụmatụ dị iche iche na ihe kachasị mma na ngwaahịa. Projects from our interior design portfolio for houses, luxurious villas made in classic style, oge a na turnkey ime imewe ọrụ na Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Galati.
Pọtụfoliyo rụọ ọrụ ime imepụta ụlọ nke oge a
firma Emeghị atụmatụ ime obodo amalitela ịmepụta echiche nke imepụta onwe onye ahaziri maka ụlọ ndị dị oké ọnụ ahịa na ebe obibi ndị dị na ya kemgbe 2008. Maka anyị, nke a abughi naanị ọrụ, kama ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ. Ahụmahụ anyị na ọkwa dị elu nke anyị enyela anyị ohere ịghọ otu n'ime ụlọ ọrụ imepụta ihe kachasị ama na kasịsị na Romania. Onye ọ bụla n'ime ọrụ ime ụlọ anyị bụ ihe pụrụ iche ma bụrụ nke a na-ahazi iji na-eche banyere mpụta na ime ụlọ nke ụlọ na mkpa onye ahịa. Ruo ugbu a, anyị arụzuwo ọrụ 150 nke ọma ime ụlọ maka ụlọ ndị mara mma n'uko, Villas na n'ala na fọrọ nke nta ka 100 njikwa ọrụ anyị na-enye nnyefe nke ihe maka ime imewe. Anyị otu nwere ike iji ihe niile kwere omume ihe na teknụzụ, niile imewe ekwekọghị si oge gboo, Baroque, ọhụrụ oge gboo oge a Mediterranean ma ọ bụ Scandinavian mee ahaziri home si ebi ndụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta ihe ime imewe oru ngo, ugbu Pọtụfoliyo nke ọrụ mere ka anyị na ụlọ ọrụ nke nwere ike inyere gị aka ikpebi na kasị kwesị ekwesị style maka ụlọ gị ma ọ bụ ulo. Classic okomoko ụlọ na n'uko ụlọ na n'ala Mediterranean style oge a Villas, anyị na-arụ ọrụ na niile ụdị ụlọ gafee mba, gụnyere Bucharest, Giurgiu, Brasov, Ploiesti, Constanta, Braila, Tulcea na Galati.
Pọtụfoliyo nke ime imewe ụlọ nke oge a - Imepụta imewe oge ochie na ụlọ ahịa Bucharest - Nobili Interior Design